အားသွင်းစက်များဖြင့် 250W Electric Scooter - Xiangyou
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > 250W လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ် > အားသွင်းနှင့်အတူ 250W လျှပ်စစ် Scooter
၈.၅ လက်မရှိသောတာယာများနှင့်အတူ Charger ပါသည့် Vapaa 250W Electric Scooter၊ 25Km / h အထိ၊ Fold-n-Carry ဒီဇိုင်း၊ Charger နှင့်အတူပေါ့ပါးသောအရွယ်ရောက်ပြီးသော 250W Electric Scooter ။
အားသွင်းစက်နှင့်အတူ vapaa 250W Electric Scooter Charger ပါ ၀ င်ပြီးအားကောင်းသောအလူမီနီယံအလွိုင်းပေါင်းစပ်ကွေးသောဘောင်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအားမြင့်မားပြီးအလေးချိန်ပေါ့ပါးသည်။ ၎င်းသည်လှပပြီးသဟဇာတဖြစ်သောလှပပြီးစတိုင်ကျလှပပြီးလျှို့ဝှက်ထားသောကားရပ်နားရန်ဘောင်ပါ ၀ င်သည်။ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော LED ဒီဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်သည်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိစေသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာသည်အနက်ရောင်ဖြစ်ပြီးအဘယ်သူမျှမထိတွေ့နိုင်သောသဲလွန်စများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောအသွင်အပြင်ရှိသည်။ ဒါဟာ vapaa 250W Electric Scooter With Charger နှင့်သင့်တင့်လျောက်ပတ်ပြီးလှပမှုအမျိုးမျိုးကိုခံစားနိုင်မှာပါ။
charger ပါ ၀ င်သည့် charger ပါသည့် vapaa 250W Electric Scooter သည်အမြန်နှုန်းမြင့်ဘက်ထရီများကိုအသုံးပြုပြီးတာရှည်ခံပြီးဘက်ထရီသက်တမ်းမှာ ၂၅ ကီလိုမီတာခန့်ရှိသည်။ အသိဉာဏ်ရှိသောဘက်ထရီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်ဘက်ထရီဆဲလ်တစ်ခုစီ၏လုပ်ငန်းအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ပြီးဘက်ထရီလုံခြုံမှု၊ သက်တမ်းတိုးသက်တမ်းကိုသေချာစေရန်အတွက်အားသွင်းခြင်းနှင့်ဥတုကာကွယ်ခြင်းနှင့်အပူချိန်နိမ့်ခြင်းစသည့်အကာအကွယ်မျိုးစုံကိုသတ်မှတ်သည်။ သငျသညျကွောကျရှံ့ခြင်းမရှိဘဲရှေ့ဆက်ကြစို့နှင့်နောက်မှတ်တိုင်မှာရှုခင်းခံစားရန်စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေပါစေ!
Charger ဖြင့်အသုံးပြုထားသော vapaa 250W Electric Scootercharger ကိုအတူညအချိန်၌စီးရခြင်း၏လုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် 1.5W high-brightness LED ရှေ့မီးများတပ်ဆင်ထားသည်။ Charger ဖြင့် 250W လျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်ဖြင့်စီးပါ။ တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားပုဂ္ဂိုလ်ရေးစတိုင်ကိုချွတ်ပြသ, သင်၏ကျက်သရေကိုပြသ! Charger ပါ ၀ င်သည့် vapaa 250W Electric Scooter ကိုခလုတ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ခေါက်။ ဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်း၏အသားတင်အလေးချိန်မှာ ၁၂.၅ ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသင်တစ် ဦး တည်းလက်ဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူဆွဲယူနိုင်ပြီးယုံကြည်မှုဖြင့်ခရီးသွားလာနိုင်သည်။ Charger ဖြင့်အသုံးပြုထားသောခေါက်ထားသည့် vapaa 250W Electric Scooter သည်ကား၏ပင်စည်ထဲသို့အလွယ်တကူထည့်သွင်း။ နေရာအနည်းငယ်ယူနိုင်သည်။ သင်၏ကားနောက်ခန်းတွင်နေထိုင်သူ the ည့်သည်ဖြစ်ကာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုနားလည်ရန်သင့်အားလိုက်ပါလာပါစေ။
Charger ဖြင့်အသုံးပြုထားသော vapaa 250W Electric Scooterwith charger adopts the front and rear double spring shock absorption system and the ergonomic curved pedal design, which makes the riding feel comfortable and can relieve riding fatigue. The large-diameter non-inflatable solid tires eliminate the trouble of maintenance. At the same time, the double braking of the electric brake and mechanical brake ensures that the braking distance is within4meters ataspeed of 20km/h, making every ride safe.
hot Tags:: ကုန်ကြမ်းပေးသွင်းသူများနှင့်အတူ 250W Electric Scooter၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံနှင့်အတူစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောကုန်ပစ္စည်း၊ တံဆိပ်၊ အမှတ်တံဆိပ်၊ ပုံစံအသစ်၊ Hot Sale၊ ၂၀၂၀ ခေါက်၊ Drop Shipping, မူရင်းအသစ်၊ OEM စိတ်ကြိုက်, တရုတ်, Made in China, Eu ကုန်လှောင်ရုံ, တရုတ်စက်ရုံ, ဥရောပကုန်လှောင်ရုံ, အီးစတော့အိတ်, စျေးပေါ, လျှော့စျေး, အနိမ့်စျေး, လျှော့စျေး, စျေး, စျေးနှုန်းစာရင်း, စျေးနှုန်း, CE, ဖက်ရှင်, နောက်ဆုံးပေါ်, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အကြမ်းခံ, လွယ်ကူသော - ထိန်းသိမ်းထား, နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်း, တစ်နှစ်အာမခံ လွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်နိုင်သော၊ ခေါက်သိမ်းနိုင်သော၊ UL အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ လျင်မြန်ခြင်း၊ လမ်းမပေါ်၊ Mini၊ အားကောင်းသော, အမြန်နှုန်း